Toeram-pambolena fisakanana ny haran-dranomasina | Reef Resilience
Manana anjara toerana lehibe amin'ny fisorohana ny fahantrana sy ny fampihenana ny fahantrana ny fisimbana. ref Manome sehatra fiarovana manan-danja ho an'ny olona izy ireo rehefa tsy azo ampiasaina ny loharanom-pahefana hafa na manara-maso ny loza voajanahary. Global Voices teny Malagasy - Angona Fifampitam-Baovaon'Olon-tsotra Manerantany gleaners dia ampiasaina amin'ny jono mpanjono haranify. ref
Olona manodidina ny 3 arivo tapitrisa (40% an'ny mponina erantany) no miaina ao anatin'ny 100 kilometatra amoron-dranomasina ref ary ny mponina amoron-dranomasina manerantany dia ampirimina amin'ny 2025. ref Satria mitombo hatrany ny mponina amin'ny morontsiraka akaikin'ny haran-dranomasina, misokatra amin'ny varavarankely vaovaoMisy tsindrin-tsakafo fanampiny napetraka amin'ny haran-dranomasina momba ny haran-dranomasina ary mihena ny trondro eny amin'ny vatohara manerana ny tany manerana izao tontolo izao, tranga iray hita tamin'ny fisian'ny seranam-barotra.
Maro ireo fiaramanidina mpanjono no manakaiky ny haran-dranomasina manerana izao tontolo izao, manangona trondro mihoatra noho ny harin-dranomasina izay afaka manohana azy. Sary © Elle Wibisono
Maro ny antony mahatonga ny fihenan'ny isan'ny trondro, anisan'izany ny aretina, ny fandotoana, ny fomba fanjonoana tsy mahasalama, ary indrindra ny fandripahana.
Tandram-bola manerantany ao amin'ny marine fish stock status from 1974 to 2009. Ny isan'ny overexploited Hatramin'ny 1970 ny tahiry, ary ny isan'ny tsy miankina,tanteraka Nihena ny tahiry. Mety hitombo hatrany ny isan'ireo mpanjono tsy mahomby. ref Source: misokatra amin'ny varavarankely vaovaoNy Fikambanana sy ny fambolena avy amin'ny Firenena Mikambanamanokatra fisie PDF .
Ny vatoharan-dranomasina dia faritra tena ilaina izay manohana ny jono ho an'ny haran-dranomasina, ary mbola mihoatra ny 60% amin'ny haran-dranomasina manerantany no eo ambany sy mivantana misokatra amin'ny varavarankely vaovaofandrahonana avy amin'ny asa ataon'ny olombelona anisan'izany ny fandrobana. ref Ny fitrandrahana mihoatra ny fandrobana dia faritana toy ny trondro trondro kokoa noho ilay rafitra afaka manohana. Ny fanimbana dia misy fiantraikany goavana, indrindra ho an'ny haran-dranomasina, toy ny karazan-trondro sasany (oh: misokatra amin'ny varavarankely vaovaoherbivores) manan-danja amin'ny fitazonana ny fizotry ny tontolo iainana haran-dranomasina. Ny fomba fanjonoana manimba toy ny fampiasana dinamita sy sianide dia tsy maharitra satria tsy dia mikendry karazan-trondro manokana ary matetika dia miteraka famonoana zaza tsy ampy taona ao anatin'izany. Ny fahasimban'ny firafitry ny haran-dranomasina dia mampihena bebe kokoa ny famokarana ny faritra, ka misy fiatraikany amin'ny fianjadian'ny trondro miankina amin'ny haran-dranomasina ary koa ny fiveloman'ny mpanjono sy ny vondrom-piarahamonina akaiky.
Trondro hita amin'ny trondro an-dranomasina manomboka amin'ny 1950 ka hatramin'ny 2010. Maherin'ny 90% amin'ireo jono voaombana eran-tany no nahatratra na nihoatra ny fetra biolojika (FAO, 2014). Raha ny fisamborana tratra eran'izao tontolo izao dia efa tafavoaka hatramin'ny fiandohan'ny taona 1990, fisondrotana mpanjono dia nitombo tsy mitsaha-mitombo hatrany ny 1970, izay manome soso-kevitra ny fihenan'ny fiara amin'ny ankamaroan'ny mpanjono. Ny fihenan'ny trondro eran-tany (loko volomparasy) dia nirodana tato anatin'ny taona vitsivitsy, na dia mandany ezaka bebe kokoa aza ny zana-trondro (zipo maromaro) mba hahazoana trondro. Source: misokatra amin'ny varavarankely vaovaoRanomasina manodidina antsika.
Antony mahatonga ny fandrobana
Tsy mahomby ny fitantanana
Ny tsy fisian'ny alternatives
Mitombo ny fangatahana amin'ny trondro sy ny vokatra azo avy amin'ny zavamaniry
Ny famokarana hazandrano manerantany dia nitombo hatrany nandritra ny taona 50. Mihabetsaka ny tahan'ny fikarakarana sahan'ady amin'ny isan-taona isan-taona amin'ny 3.2%, avo roa heny amin'ny fitomboan'ny isan'ny mponina ao amin'ny 1.6%. Ny fisondrotry ny trondro ny kapita dia nitombo eran-tany tamin'ny antsalany 9.9 kg tao amin'ny 1960s ka hatramin'ny 19.2 kg tao 2012. Io fampandrosoana mahatalanjona io dia notarihan'ny fitomboan'ny mponina, ny fidiram-bola ary ny fanabeazana, ary ny fampiroboroboana ny famokarana ny trondro amin'ny alàlan'ny rano sy ny zavamananaina an-dranomasina ary ny fampitam-baovao mahomby kokoa. ref
Fahaizana mahomby kokoa / Technologies izay maka trondro hafa alohan'ny ahafahany mamorona
Ny fomba sy ny haitao mahomby kokoa amin'ny fanjonoana dia nanjary naka trondro betsaka alohan'ny hamokarana. Ny fanatsarana ny teknolojia amin'ny fahefan'ny jono sy ny fahombiazany dia mampihena ny vidin'ny trondro. Ny herin'ny jono dia nitombo noho ny ampahany, tamin'ny motera matanjaka mahery vaika afaka mitondra sambo lehibe kokoa, ary nampitombo ny fahafaha-mividy sy ny safidin'ireo fitaovana fanjonoana. ref Ny fandrosoana ara-teknolojika amin'ny famolavolana ny fitaovan'ny mpanjono sy ny fitaovana fitiliana dia nampitombo ny fahombiazan'ny fanjonoana. Izany dia manatsara ny fahaiza-manaon'ny mpanjono amin'ny famporisihana ireo olona vaovao hanatevin-daharana ny fisian'ny fisamboaram-bary, izay miteraka famongorana ny tahiry. Ny famongorana ny taham-pivoarana indray dia mandroso ara-teknika sy fanatsarana ny fahaiza-manao ara-teknolojia, izay mitarika ho amin'ny voka-dratsin'ny fanavaozana, ny angatahana demografika, ny tsy fahampiana ary ny toy izany. ref
Ny harato manjono miaraka amina fitsangantsanganana dia miorina amoron-dranomasina amin'ny toby fanjonoana teratany kely eo amoron'ny Isla Fanahy Santo ao amin'ny Ranomasin'i Cortez any Mexico. Sary © Mark Godfrey
Fitantanana tsy ara-dalàna sy fampiharana fisorohana fisaka
Ao amin'ny tontolo mandroso dia maro ireo jono ara-barotra marobe no salama na manorina indray, ary eo ambany fitantanana. ref Ny ankamaroan'ny jono mpanjono haran-dranomasina, na izany aza, dia matetika tsy voafehy sy tsy misy fitantanana. Ny tahirim-bolam-panjakana dia amin'ny ankapobeny ambany ambanin'ny lanjan'ny biomass ary ny ezaka fanjono dia mbola avo loatra ho fisian'ny fisotroana salantsalany. Ny haavon'ny fitantanana ny fanjonoana dia tsy ampy ny ankamaroany, na dia tsy ny rehetra aza, avy any Azia, Afrika, ary Atsimo sy Amerika Afovoany. Maro ireo mpanjono any amin'ireny faritra ireny no tsy manana ny fahaiza-manaon'ny fitantanana sy ny loharanon-kery, ary amin'ny toe-javatra sasany dia ny sampana fitantanana no ilaina mba hisorohana ny fitrandrahana. Fanampin'izany, ny fisotroan-jaton'ny vatohara dia matetika ahitana karazana trondro maromaro, karazana fitambarana maromaro, ary seranan-tsambo maro izay manamora ny fanaraha-maso sy ny fampiharana. Vakio bebe kokoa momba ny fampiharana ny fampihavanam-pirenena.
Ny tsy fahampian'ny fitantanana dia mety hiteraka fanjonoana be loatra sy trondro kely kokoa amin'ny hazandrano. Ny mpikambana ao amin'ny fianakaviana Paulino (Enipein Village any Pohnpei, Federated States of Micronesia) dia manadihady ny trondro azony ka amidiny amin'ireo mpikambana hafa ao amin'ny vohitra misy azy ireo. Matetika ny mpanjono dia mahazo trondro fanampiny hahafahany mivarotra izay tsy hohaniny mba hahazoana fidiram-bola fanampiny ho an'ny fianakaviany. Mihombo ny ahiahy eo amin'ny governemanta Pohnpeian sy ny vondrom-piarahamonina miaro ny tontolo iainana fa ny fampitomboana ny varotra ny jono amoron-dranomasina Pohnpei dia mitarika amin'ny fampiasana loharanon-karena tsy maharitra sy fihenan'ny isan'ny trondro. Sary © Nick Hall
Tsy fahampian'ny safidim-piainana ara-pivelomana maro any amin'ny vondrom-piarahamonina Coastal maro
maro misokatra amin'ny varavarankely vaovaopanohera kely Ireo fokonolona miankina mivantana amin'ny fisarihana dia manana vatsy vitsivitsy azo ampiasaina, izay miteraka fanerena be loatra amin'ny loharanon-jaza. “Any amin'ny faritra maro atsy Afrika, ny jono madinidinika sy ny hetsika mifandraika amin'izany (varotra, fanodinana) dia manome fidiram-bola ho an'ny vondrom-piarahamonina ambanivohitra izay misy ny fotoana mety hisian'ny asa hafa na tsy misy mihitsy. Amin'ireny toe-javatra ireny, ny jono madinidinika, ny fanodinana trondro ary ny varotra dia manome ny olona harato fiarovana manan-danja, ary indraindray manandanja, izay manampy amin'ny fiarovana azy ireo amin'ny vokatry ny tsy fetezan'ny vidin'ny vokatra, ny krizy ara-toekarena, ny fanavaozana ny rafitra, ny fijinjana tsy fahombiazana, korontana politika ary antony hafa mandrahona ny fitoniana any ambanivohitra sy ny filaminan'ny sakafo. ” - misokatra amin'ny varavarankely vaovaoWorldFish Center
'Bagan' eo an-toerana, mpanjono harato manintona manintona, ao amin'ny seranan-tsambo Labuan Bajo ao amin'ny valan-javaboary Komodo any Indonezia. Sary © Peter Mous
Ny fiantraikan'ny fanimbana
Ny fanimbana dia mety hitarika ho amin'ny fihenanam-po lasibatra ary tsy lasibatra pananan'ny trondro, na dia hatramin'ny fiterahana aza. Mety hisy fiantraikany amin'ny tontolo voajanahary (ohatra, fiovan'ny karazan-karazan-tsakafo noho ny fihenanam-po / famonoana ireo biby mpiremby na biby be mponina). Ankoatra izany, ny karazan-trondro sasany (ohatra, misokatra amin'ny varavarankely vaovaoherbivores) dia manan-danja amin'ny asan'ny ecosystems momba ny haran-dranomasina. Raha simba ireo karazana ireo, dia mety hiova ny vatohara ho an'ny haran-dranomasina ny rafitra fiarovana.
Ny fitrandrahana tafahoatra koa dia misy fiatraikany lehibe amin'ny fiarahamonina miankina amin'ny olombelona. Ohatra, olona maherin'ny 275 tapitrisa no miaina eo akaikin'ny haran-dranomasina, izay toa miankina amin'ny haran-dranomasina ny fivelomana. Ny haran-dranomasina salama tsara tantana dia afaka mamokatra hazan-dranomasina 0.2 sy 40 taonina isaky ny kilometatra toradroa isan-taona. ref Ny loza ateraky ny fiompiana trondro sy ny fiompiana fako amin'ny haran-dranomasina dia mety hisy fiantraikany mivantana amin'ny fiveloman'ny fiarahamonina amorontsiraka.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoTatitra momba ny fivorian'ny FAO / UNEP momba ny fiantraikan'ny fampiasana fanjonoana mandatsa-dranomaso, fanjonoana tsy azo antoka, ary tsy ara-dalàna, tsy misy filazana sy tsy ara-dalàna (IUU)manokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoNy Fanjakan'ny Fanjakan'Andriamanitra sy ny Aquaculture
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoToe-karena sy toetran'ny vatohara Karaiba: 1970-2012manokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoNy Ranomasina Manodidina ny Tetikasa